Ogaden News Agency (ONA) – Tooriyayn Balaadhan oo Ka Dhacday Magaalada Paris.
Tooriyayn Balaadhan oo Ka Dhacday Magaalada Paris.
Posted by ONA Admin	/ September 11, 2018
Toddobo ruux ayaa dhaawacantay, afar ka mid ahna xaaladdoodu way liidataa ka dib markii nin mindi wata uu weerar ka gaystay magaalada Paris, sida ay booliisku sheegeen.
Ninka oo la sheegay in uu reer Afghanistan yahay ayaa la xiray, ilaha qaarkood waxay sheegayaan in aysan jirin wax tilmaamaya in uu weerar argagixiso ahaa. Xogo kala duwan oo la helay ayaa sheegaya in labo ka mid ah dadka dhaawacmay ay yihiin muwaadiniin Britain u dhalatay.
Weerarka ayaa ka dhacay 19th arrondissement oo ku taalla waqooyiga bari ee caasimadda. Ilo wareedyo kale ayaa sheegay in ninku uu weeraray dad uusan aqoon u lahayn uuna markii hore labo nin iyo haweenay ku tooriyeeyay meel u dhaw shaneemada MK2.
Dhawr ruux oo meel aan sidaa uga fogayn ku ciyaarayay ayaa la sheegay in ay isku dayeen in ay xakameeyaan iyaga oo ku tuuray kubadihii ay ku dheelayeen. Ninka ayaa la sheegay in uu markaas cararay. Intaas ka dibna waxaa la sheegay in uu dalxiiseyaasha Britain u dhashay ku weeraray Henri Nogueres.
Ilo wareedyo ka tirsan booliiska dalka Faransiiska ayaa sheegay “in hadda aysan muuqanin wax weerarkan la xiriirinaya fal argagixisonimo ah”.